Jamhuuriyadda Jabuuti oo beenisay in dalkeeda laga helay qof qaba cudurka Coronavirus | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Jamhuuriyadda Jabuuti oo beenisay in dalkeeda laga helay qof qaba cudurka Coronavirus
Jabuuti (Halqaran.com) – Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxay si xoogan u beenisay wararka sheegaya in qof qaba xanuunka Coronavirus laga helay dalkeeda.
Dalka Jabuuti ayaa waxaa ku sugan kun (1,000) askari oo ka socda dhulweynaha Shiinaha, kuwaa oo saldhig militari halkaasi ku leh.
Taliska Ciidamada Mareykanka ee Jabuuti ayaa war uu soo saaray ku sheegay qof qaba cudurka Coronavirus, una dhashay dalka Shiinaha in lagu arkay dalka Jabuuti, taasoo walaac ku abuurtay dadka reer Jabuuti.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Jabuuti ayaa waxba kama jiraan ku sheegtay warka ka soo yeeray Ciidamada Mareykanka ee dalkaasi ku sugan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa qoraal ay soo sheegtay ku cadeysay illaa iyo hadda inta laga warqabo aanu jirin qof qaba Coronavirus oo lagu arkay dalkeeda.
Isu socodka Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Shiinaha oo mid joogto ah ayaa waxaa jira dareen ay dadku ka muujinayan suurtagalnimada in Ciidamada Shiinaha ay cudurka u soo gudbiyaan Jabuuti.
Jamhuuriyadda Jabuuti oo beenisay in dalkeeda laga helay
qof qaba cudurka Coronavirus